Imephu yehlabathi yayijongeka njani ngo-1922-Geofumadas
Njani imephu lehlabathi 1922
NgoDisemba, 2013 Iiphotography, Izopolitiko kunye nentando yeninzi
Olu shicilelo lwakutshanje lwe-National Geographic luzisa izihloko ezibini ezinomdla omkhulu:
Kwelinye icala, ingxelo ebanzi yenkqubo yokuchwetheza ubutyebi kusetyenziswa iinkqubo zokufaka i-laser.
Le yinto yomqokeleli, echaza ubunzima bomsebenzi ebusweni beNtaba iRushmore eSouth Dakota kunye nokudibana kwezithixo zamaHindu kunye namaqabane abo ababhinqileyo eRani Ki Vav, umngxunya owenzekileyo wenkulungwane yeshumi elinanye ngentshona India
Enye into eqokelelweyo kolu shicilelo yimephu yeminyaka engama-125 yeminyaka, enekopi engama-50 x 75 cm yeMephu yokuQala yeHlabathi Jikelele yeNational Geographic Society, epapashwe ngoDisemba 1922 kwaye ibonisa utshintsho olukhulu lwenkulungwane yamashumi amabini emva kweMfazwe yeHlabathi yokuQala.
Inomdla kwaye iyafundisa kwizifundo esingaziboniyo apha ngasentla kwiKlasi yezeNtlalontle yelo Banga leThoba eAlfonso Guillén Zelaya Institute. Le mephu iphinda idwebe imida yezopolitiko yaseYurophu kunye nakuMbindi Mpuma emva kweSivumelwano sango-1919. Kwakungeli xesha apho iJamani eyayilahlekisiwe yaba yinto yokugculelwa, kwaye imimandla yayo e-Afrika nasePacific yadlula ezandleni zaboyisi. Abahloli babefikelele kwiipali ezisemazantsi nezasemantla, nangona iindawo ezinkulu ezazigqunywe ngumkhenkce kwiilwandlekazi zeArtiki naseAntarctic zahlala zingafakwanga.
Ngokuqinisekileyo, yayikhona imifanekiso yeemaphu, kodwa yaba yimpumelelo engathethekiyo kwi-National Geographic ukupapasha imephu "yaseburhulumenteni" yeziphumo zeMfazwe yeHlabathi yokuQala, apho umndilili wabantu abangama-6,046 ngosuku babhubha iminyaka emine. Kwimephu ungabona izinto ezibonisa umdla ezigcinwe kuphela ngale ndlela esinokuthi siziqonde, ezinje:
I-Iran yayisabizwa ngokuba yiPersi. Sele ikho into eya kuthi emva kwexesha ibizwe ngokuba yiSoviet Union emva kokuguqulwa kobukumkani baseTsar. I-Turkey ikwavela emva kokupheliswa kobukhosi base-Ottoman. Kwaye ukusuka ekuphelisweni kobukhosi base-Austro-Hungary kubonakala i-State of Austria kunye neRiphabhliki yaseHungary, iCzechoslovakia neYugoslavia.
Ungasibona isigunyaziso saseJapan ngaphezulu kwePacific Islands; Eso sikhundla samnika umoya wenkululeko kwaye samenza uzwilakhe kwiMfazwe yesibini yeHlabathi. Ndisayikhumbula inguqulelo yasekhohlo katitshala wam, xa wasicacisayo ukuba iJapan yahlasela ngomoya wokukhulula imimandla eyayilawulwa bubukhosi obukhulu baseBritane nabaseFrance, emva koko wayilibala waphela sele eyenye ikholoniyali eyenza ubumenemene obukhulu kunye nabo babalaseleyo.
Imephu ibonisa iindlela zomoya ezi-tentative, ngelo xesha ezazinoveli ukuba zivele emephini. Iindlela zomoya ezisebenzayo zivela kumgca oqhubekayo, ongamacandelo amafutshane kuphela kumazwekazi. Kwimigca echaziweyo iindlela ezigunyazisiweyo kodwa ezingasebenziyo, zivela apha eBuenos Aires - eRio de Janeiro, kunye necandelo elisusela esiphelweni seBrazil ukuya eSenegal eAfrika. Ezinye iindlela zelizwekazi zibonakala zihamba kuphela kodwa zingamkelwa ngokorhwebo.
Imephu ine-inlays encinci yemisinga yolwandle, imimoya, kunye noxinano lwabemi. Abona baphezulu bangaphezulu kwama-400 abantu kwisikwekhilomitha, apho kuphela kwimpuma yeTshayina, emazantsi eJapan, embindini weIndiya nakumantla eFrance. Phakathi kwabemi abali-100 ukuya kuma-400 kwisikwekhilomitha nguMbindi Yurophu, eIndiya, eTshayina, naseUnited States isuntswana nje eNew York. Ngelo xesha i-United States yayingengomntu, ngaphandle kwelizwe elinemveliso kuphela eMelika, kodwa ukuthatha inxaxheba kwayo kwavula indlela yokuba izibeke emhlabeni njengomntu obolekayo kunye nekholoniyali entsha.
Into ebangela umdla kukuba, isikhumbuza ukuba impixwano iphele njani kwaye njani iimeko zazilungele umzuzwana owaqhuma kwiminyaka nje eli-17 kamva.
Ukuthenga ingxelo yedijithali:
Andinalwazi ukuba imephu iza kule okanye kuphela kwinguqulelo eprintiweyo.
Post edlulileyo«Ngaphambilini 2014-Uqikelelo olufutshane lomxholo weGeo
Post Next Iikhosi zeMephu zeGIS: ezilungileyo zikhona.Okulandelayo »